Ọzụzụ Kọmputa na-achịkwa ngwaọrụ ngwaọrụ - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (NHỌMỌDỤ SPECIALIZATION ỌKỤRỤ // FULL-Oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
arụ ọrụ kọmputa na-achịkwa kọmputa
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Afọ 7e maka iche iche > Computer-achịkwa igwe ngwaọrụ
Na 7e afọ iche iche Ngwaọrụ ndị na-achịkwa kọmputa (oge zuru ezu / BSO) ị mụtara otú e si melite ma rụọ ọrụ igwe CNC. Ị kpochapụrụ iche na usoro CNC dị iche iche, yana akwụkwọ obibi 3D. Ị mụtara otú e si emepụta ihe na ngwanrọ ọkachamara, na-elepụta CNC mmepụta. Ị mụtara ịgụ na ịkọwa ụdị eserese ndị a. Nke a na ya na ụwa.
Omume bara uru, nbanye na ụlọ ọrụ nwere ngwá ọrụ igwe na-achịkwa kọmputa, nkuzi banyere usoro sitere na IT na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-etolite n'obi nke ọzụzụ ahụ. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-arụ ọrụ nke ọma n'iwepụta ihe, ọrụ na ngwaọrụ; na -emepụta ihe ndị nwere igwe na-achịkwa kọmputa ma ị mụta itinye aka na nchekwa, gburugburu ebe obibi na ọnụ ahịa. Ị mụtara ịhazi usoro mmepụta ma gbanwee ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ịnwere ike ịbanye naanị afọ 7 ma ọ bụrụ na ị nwetalarị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Dị ka okwesiri, ị natara ọzụzụ na mpaghara ọka ahụ: Ngwongwo ihe eji eme ihe (ngwa igwe).
Ọ bụrụ na ị gafee usoro a ị ga-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị. Ị nwere ike ịmalite ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị. Ọrụ ndị nwere ike ịbụ ndị na-arụ ọrụ ígwè, onye ọrụ CNC, onye na-akpụzi ihe, onye na-emepụta ihe, wdg. Ya mere ị nwere ike ịmalite ngwa ngwa na mpaghara ahụ Ị nwere ike ịnọgide na-amụ ihe. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ ebe a.
Lelee ebe a na-amụ ihe nke afọ 7e maka afọ ọkachamara Kọmputa na-achịkwa Ngwaọrụ (BSO):